Qoyska Taliyihii Ciiddanka Kenya ee Saldhigga Ceel-cadde ee ay Alshabaab qabsadeen oo rajo ka muujiyey inuu nool yahay. – Radio Dalsan FM 91.5 MHz | Warar Sugan | Somalia News
Bishan 15-dii, Alshabaab waxay guluf xooggan ku qaadeen, isla markaana uitaal-sheegteen Ciiddankii Kenyanka ee ku sugnaa Saldhigga Ceel-cadde ee Gobalka Gedo.
Weerarkaasi waxaa la sheegay inay Alshabaab ku qabsadeen Saraakiil uu ka mid ahaa Taliyihii Saldhigga Ceel-cadde, Gaashanle Geoffery Obwoge, waxayna Alshabaab isbuuc hore duleedka Degmadda Jilib ku soo bandhigeen Hub, Gaadiid iyo Maxaabiista Kenyanka ee ay Alshabaab ku soo qabsadeen Saldhigga Ceel-cadde.
Qoyska Gaashanle Gaashanle Geoffery Obwoge, ayaa rajo ka bixiyey inuu weli nool yahay, waxayna Dowladda Kenya ka sugayaan Jawaab ku aadan Taliyahaasi la la’ yahay.
Zebedeo Ayaka oo ah walaalka ka yar Gaashanle Geoffery Obwoge, ayaa u sheegay Wargeyska the Star inay aad uga war sugayaan inuu dib u soo laaban doono Walaalkiisa oo uu tilmaamay inu uahaa Qofka keliya ee ay ku nool yihiin Qoyska.
Aabaha dhalay Taliyihii Ciiddanka Kenya ee u gacan-galay Alshabaab, Charles Obwoge ayaa sheegay inuu ku rajo weyn yihiin in la heli doono Wiilkiisa oo nool, wuxuuna xusay in markii ugu dambeysay ee uu la hadlo Wiilkiisa ahayd bishii hore, ka hor inta uusan u soo ambabaxin Somalia.
Aabahaasi waxa kale uu ugu baaqay Dowladda Kenya in la dardar geliyo Hawlaha Gurmadka ee lagu baadi-goobayo Askarta lagu la’ yahay Ceel-cadde, isla markaana ay la soo socodsiiyaan Ehelladda wixii ka soo baxa Natiijadda Hawlgalkooda.
Dhinaca kale, Taliyihii Saldhigga Ceel-cadde, Gaashanle Jefori Obwoge oo 32-jir ah, waxa uu Ciiddanka Kenya ku biiray sannadkii 2002-dii, isagoo ka tirsan Guutadda Moi Forces ee fadhigoodu yahay Deegaanka Eldoreet.
Waxa uu ka hawlgeli jirey Mandera, ka hor inta uusan ka mid noqon karin Askarta Kenyanka ee bishii hore la geeyey Saldhigga Ceel-cadde ee Gobalka Gedo.
Maraykanka oo mar kale u xaqiijiyey Kenya inay ka taageerayaan Dagaalka Alshabaab.